ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၅)
ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၅)
Posted by asiamasters on Aug 22, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, History |7comments
ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးခဲ့တာက ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ လေးတန်း စာမေးပွဲ ဖြေပြီးချိန်မှာ အဖွားဖြစ်သူနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးခြင်းပါပဲ။ ၃၁ လမ်းမှာ အဖွားရဲ့ မောင်တစ်ဦးရှိပါတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာပဲ တည်းခိုပါတယ်။ အတော့်ကို ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ပါတယ်။ အဖွားရဲ့မောင်ဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ ထားဝယ်ကနေရန်ကုန်ကို မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း ဖော်ကာ F-27 လေယာဉ်ကို စီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီ နယ်သာလန်နိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ ဖေါ်ကာ F-27 ကို ကျွန်တော် Pilot ဖြစ်တဲ့ အချိန်ထိ လဲသုံးနေဆဲပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်မြို့တော်တွင်း နောက်ဖေးလမ်းကြားများဟာ အလွန်ညစ်ပတ်နံစော်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကို ပထမဆုံးရောက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်က ကားပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ အန်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်မူးတာရယ်၊ ကားမူးတာရယ် အနံ့အသက် တွေရယ်အားလုံးပေါင်းဆုံလို့နဲ့တူပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ရန်ကုန်မှာဘယ်တော့မှ မနေတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ မလုပ်ချင်တာတွေ၊ မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် လုပ်လာရတာကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ပါပဲ။ အဲဒီတုန်းကရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့ အရှေ့ဘက်ဆိုရင် YMCA၊ အနောက်ဖက်ဆိုရင် တရုတ်တန်းနဲ့ မြောက်ဖက်ဆိုရင် ရွှေတိဂုံဘုရားထိသာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာဘယ်တော့မှမနေတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ရန်ကုန်မှာ အခြေချဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဇနီးဟာ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံကြီးကို ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း ဆေးရုံကြီးကို ဂန္ဒီဆေးရုံလို့လဲခေါ်ပါတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာလည်း ဇနီးသည်ဆေးရုံသွားဖို့လွယ်ကူရန်အတွက် ဗိုလ်တ ထောင်မှာ ရှိတဲ့ 2nd Thomson လမ်းကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်တထောင်ကိုရောက်တာနဲ့ အနီးအနားတ၀ိုက် ကိုယ့်ခြေ တောက်ကိုယ်သုံးပြီး လိုက်ကြည့်တော့တာပါပဲ။ ဒီအနီးအနားတ၀ိုက်မှာ ဂိုဒေါင်တွေများပါတယ်။ ယခင်က လက်နက်တွေသိုလှောင်ထားခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ သေသေချာချာမေးမြန်းစုံစမ်းလိုက်တော့ ဂဠုန်ဦးစောကို ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဘရင်းဂန်းအလက် (၂၀၀)ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့နေရာကိုတွေ့ပါတယ်။ လက်နက်တွေကို ထုတ်ပေးခဲ့သူက Captain Vivian လို့အမည်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဂဠုန်ဦးစောဟာ ဒီဘရင်းဂန်းတွေကို ထုတ်ထားတာဟာ တကယ်တန်းတော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို သတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီခေတ်က ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီအတွက် ငွေအရင်းအနှီးအလွန် လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကုန်သည်လမ်းနဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်းဒေါင့်မှာရှိတဲ့ Mercantile ဘဏ်ကို ဓားပြတိုက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Captain Vivian ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ တောခိုကရင်သူပုန်တွေနဲ့ပါသွားပြီး တောထဲမှာပဲ အသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့အိမ်ကိုသွားဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်က မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုသွားပို့ပေးတာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ မိသားစုဝင်များနဲ့လဲမိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ အိမ်ဟာ AD လမ်းမှာပဲရှိပါတယ်။ ပြည်လမ်းကနေသွားရင် ပါရမီလမ်းမှာ ညာကွေ့ရပါမယ်။ အရှေ့မှာတွေ့တဲ့ လမ်းခွဲမှာ ညာဖက်ဆက်လိုက်သွားရင် AD လမ်းပါပဲ။ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့အိမ်ဟာ လမ်းရဲ့ ညာဖက်မှာရှိပါတယ်။ နံပတ်တော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အဲဒီကဆက်သွားရင် ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့အိမ်ရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့ အိမ်ရှေ့အိမ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တန်းအားဖြင့် အရင်လုပ်ကြံခံရသူက ဂဠုန်ဦးစောဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ကြံခံရတဲ့နေရာက ပြည်လမ်းကုန်းအဆင်း၊ မြေနီကုန်းမီးပွိုင့်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂဠုန်ဦးစောစီးလာတဲ့ကားနောက်ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်လာပြီး ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ရုပ်ရှင်ဆံဆံ လုပ်ကြံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတော့ ဂဠုန်ဦးစောမသေပါ။ မော်တော်ကားမှန်ကွဲစသာ မျက်လုံးထဲဝင်သွားလို့ အိန္ဒိယမှာ သွားကုရပါတယ်။ ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည်။
Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..
I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.
View all posts by asiamasters →
အေဒီလမ်းထဲက နံပါတ်ဝမ်းကြီးဦးနေဝင်းနေအိမ် လုံခြုံရေးအတွက် လမ်းထဲရှိ အိမ်ပိုင်ရှင်များကို စစ်ဆေးကြည့်တော့ ဂဠုန်ဦးစောအိမ်ကိုတွေ့ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းက ပြသနာမရှိရင် သူတို့ဖာသာနေပါစေ အနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ့ပြောလို့ နေအိမ်အဖယ်အရှားခံရခြင်းမှ သက်သာရာရခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို လုပ်ကြံဖို့ ဂဠုန်ဦးစောကိုယ်တိုင်ထက် သူများခိုင်းလို့ လုပ်တာလို့ သိထားရပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်သူက ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ခဲ့တာပါလဲ….
Captain Vivianလည်း ပါဝင်ပတ်သက်သယောင်ယောင် သိထားရပါတယ်
ဂဠုန်ဦးစောကို နောက်ကချယ်လှယ်သူရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်
No, this is mainly because of revenge,
because, ဂဠုန်ဦးစော was လုပ်ကြံခံရ/shot by ” Pyi Thu Yae Baw ”
” Pyi Thu Yae Baw ” leader is ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း,
So, ဂဠုန်ဦးစော killed back to ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း.
ဂဠုန်ဦးစော ကို ကြိုးပေးခါနီး နောက်ဆုံး သမီး ထံသို့ ပေးစာ ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကို မေတ္တာရှင်ဆရာတော် ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်။
ဆရာတော်က တော့ အနည်းငယ် ကောက်နှုတ်တာ ဆိုတော့ များများ သိချင်လာတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းတင် မကဘူး ဂဠုန်ဦးစော အကြောင်းပါ သိသလောက် ရေးပေးပါ။
ဂဠုန်ဦးစော ကို ကြိုးကိုင်ခိုင်းစေရာမှာ နောက်ကွယ်ကနေ အင်္ဂလိပ်အစိုးရသက်သက်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်နော်။ပြည်တွင်းက သစ္စာဖောက် တော့ပါ ပါလ်ိမ့် မယ်ထင်တယ်။ဥပမာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ကိုယ်တိုင်တောင် ပါနေနိုင်ပါသေးတယ်။
A recent release of classified documents from British Foreign office regarding the assasination of Aung San has prompted an investigation by BBC. BBC reported that the assasination plot was far more complicated then previously thought. It was suggested that the involvement of high ranking British government officials were hidden by British Foreign office until 1997. BBC traced back some links between Sir Reginald Dorman-Smith (an ex governer of Burma) and U Saw – the convicted assassin.
By The Irrawaddy AUGUST, 1997 – VOLUME5NO.4/5
Q: Who do you think really killed Bogyoke Aung San?
A: Who really killed Bogyoke Aung San was the British government. It was their plot. Q: Why do you say that? A: I suppose there were three reasons why he was killed. Firstly, Bogyoke Aung San was the leader who could organise and unite the whole country so they were afraid of the whole of Burma uniting. This was the main reason. Secondly, Bogyoke Aung San could reunite with the Communist Party of Burma. They were worried about that too. And finally, they supposed that they could handle Burma more easily if they removed him. These were the reasons why he was killed. I better give my opinions and some evidence why I say that the British were involved in this assassination. First evidence From the very beginning, the British government had noticed that U Saw was conspiring something. They even understood that these actions were aimed at Bogyoke. Regarding this fact I remember two things. First, before the assassination, U Saw’s house was kept under police surveillance. One of my relatives who was thenapolice officer, told me that he was on duty fromanearby houseaweek before the assassination. He said that they had to report their findings daily and thought surveillance had begun even before he was put on duty. The second thing is that during 1960’s or 1970’s on one Martyr’s Day anniversary, one of the Burmese newspapers published an article written byaretired police officer who was thenastation master in Mayangon police station which handles affairs in that quarter of Ady Road where U Saw’s house was located.